DF oo ku hanjabtay in ay kabixi doonto IGAD | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay Warsaxaafadeed Faafin deg deg ah, taasoo ay ku sheegtay in ay ka bixi doonto ugur goboleedka IGAD.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kaddib warbixintii Urur goboleekda IGAD ay ka soo saartay is haysadkii udhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya waxay Dowladda Soomaaliya soo saartay warsaxaafadeed faafin deg deg ah kasoo ay dowladda Soomaaliya ku hanjabtay inay ka bixi doonto ururka IGAD hadii aan laga laaban warbixinta.
Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya oo horay uga hadlay ayaa ku eedeeyay in dowladda Jabuuti ay la safatay dowladda Kenya, waxa uuna eed kulul dusha uga tuuray madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa soo saartay faafin degdeg ah taasoo ay ku hanjabtay in ay ka bixi doonto urur goboleedka IGAD ee fadhigiisu yahay magaalada Jabuuti ee waddanka Jabuuti, waxaana lagu yiri haddii aan laga laaban warbixintaas laga soo saaray xaalada Kenya iyo Somalia Isla markaana aan laga bixin raali-gelin dowladda Soomaaliya kama sii mid ahaan doonto urur goboleedka IGAD.
Halkan hoose ka akhriso warbixinta ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya: